Kugadzirisa CTAs kana Ads neWordPress | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 30, 2013 Chishanu, December 1, 2017 Douglas Karr
Isu tinomhanyisa musanganiswa wekutenga kushambadziro pane yedu saiti - kusanganisira kufona kune zviito mabhenji kusimudzira masevhisi edu, vanobatana kushambadzira kwemakambani atinovimba, uye inotsigirwa kushambadzira nemakambani avo vatakasarudza kushamwaridzana navo. Iko kusanganiswa kwakasiyana kwemapakeji kwakaomarara, saka isu takabatanidza nzvimbo dzeshambadziro mumusoro wedu wekutarisira kuratidza kushambadzira.
Kusanganiswa ne Sarudzo yekuonekwa kwaJetpack nemajeti, kuisa zvine chekuita uye zvine simba zvekufona-ku-kuita kana kushambadza zviri nyore kwazvo kuita neWordPress nhasi. Yako WordPress saiti inogona kusapa kushambadzira kwekunze kana kuda izvo zvatinoita. Muchokwadi, iwe unogona kungoda maneja ako ako maCMA. AdPress ndeye WordPress plugin yakavakirwa chaizvo izvi.
AdPress iri yekutanga plug-in yekushandisa Ads. Ipuratifomu ine simba uye yakazara zvakakwana yekutengesa uye kuratidza kushambadzira kune yako WordPress blog:
Kugadziridza Nyore - Gadzira mushandirapamwe wako mune mashoma mashoma neAdPress Ad Dhizaini. Tsanangura kuti iwe Ad ucharatidza sei, iyo Call To Action Ad, chibvumirano chekutengesa… Kubatanidza yako Ad Zone munzvimbo yako blog iri nyore. AdPress ine widget, shortcode uye basa rutsigiro.
Zvoga Kutengesa - Vashandisi vanosaina-uye vanotenga Ad Spots kubva kune yavo profiles dhibhodhi Kubhadhara kunoitwa otomatiki nePayPal. Kana mushandisi akaita kutenga, iwe unoziviswa mune yako dashboard, uye iwe unogona kugamuchira kana kuramba Ad yavo. Kubhadharwa kwePayPal kunotsigirwa futi.
Ad Analytics - Ad Ad Stats anowanikwa kune ese ari maviri Admin uye mutengi uyo akatenga iyo Ad. AdPress inopa yakadzama manhamba neCTR, Avhaji uye yakanaka chati.
Nhoroondo, Kunze / Export, Kugadzirisa - AdPress inorekodha nhoroondo yekutenga kweAdhi yega yega. Iyo zvakare ine simba rekunze uye Export ficha iyo inotsigira-kumusoro zvese kana chikamu che data rako kune back-up faira. AdPress Ads inogona kunyatsogadziriswa. Iyo inogadzirwa HTML neCSS kodhi yeiyo Ads inogona kuchinjwa kubva kune ekugadzika pani.
Rubatsiro uye Tsigiro - AdPress inouya ine yakadzama faira rubatsiro faira. Vanopawo rutsigiro rwakakurumidza (foramu + maemail). Tarisira mhinduro mukati mezuva kana maviri.
Shandisa yedu yakabatana link uye iwe unogona download AdPress kune yako saiti kwe $ 35 chete. Iyo plugin ine yakakwira ratings uye inoda kusvika chiuru chimwe kutenga kusvika zvino.
Tags: ad manejaadpressmushandirapamwe wemushandirapamweWordpress ad manejawordpress mushandirapamwe manejaWordpress plugin